ခူမီးလူမျိုးနွယ်စု (၁၈) အနက်မှ မတူ-တအွား or တအော pre အကြောင်း သိကောင်းစရာ - Khumi Media Group ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Khumi Media Group
KMG is established since February 11, 2012 for the communication developments, upgrading daily actual news from both local and international news where we Khumi people are living in.
About KMG အကြောင်း
Video / musicဖျော်ဖြေရေး
aboutabout Khumi and Paletw
ခူမီးလူမျိုးနွယ်စု (၁၈) အနက်မှ မတူ-တအွား or တအော pre အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Friday, December 28, 20122မှတ်ချက်
တစိပ်ကို တစ်အိတ်၊ ကြမ်းပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းလုပ်ခြင်းလား သို့မဟုတ် အသိနောက်ကျခြင်းလားဆိုသည်ကို အလေးအနက် စဉ်းစားသင့်ပါပြီ။ ချင်းပြည်နယ်တစ်ခုကို နိုင်ငံတစ်ခ အဖြစ်ပြောင်းလဲလို့မရသလို ပလက်ဝမြို့နယ်ကို ပြည်နယ် (သို့) တိုင်း တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲ လို့ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ချင်းပြည်နယ်ကို ချင်းနိုင်ငံဟု ပြောဆိုလျှင် မည်သူများ သိမည်မဟုတ်သလို သူများက သရော်ပြောင်လှောင်စရာဖြစ်လာမည်သာ။
စာရေးသူရဲ့ ဇာတိရွာဘက်တွင် မိမိတို့နယ်မြေဒေသ လူမျိုးများကို အကြောင်းပြုပြီး တေးသီချင်းများ စပ်ဆိုကြလေ့ရှိရာ မိမိတို့ လူမျိုးနဲ့ နယ်မြေကို Ta aw pre ဟု မကြာခဏ စပ်ဆိုကြသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် စာရေးသူရဲ့ စိတ်ထဲတွင် မေးခွန်းပေါင်း များစွာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်က အကြိမ်ကြိမ်။ သီချင်းစပ်ဆိုသောသူများက pri or pre ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားမလည်သဖြင့် တအော pre ဟု စစပ်ဆိုခြင်းလော? သို့ မဟုတ် သီချင်း၏ အနက်အဓိပ္ပာယ် အရ ဖွင့်ဆိုရခြင်းလော? ဆိုသည်ကို
နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပါသည်။ pri (သို့) pre ဆိုသော စကားသည် အင်္ဂလိပ်လို land ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ…မီဇိုး Ram, Lai ram, Matu Ram,Khumiland, Mara Land, Dai land, စသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ Ram (သို့) land သည် ကျွန်တော်တို့ ပြောဆိုနေသော pri (သို့) pre ကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးသူတို့ အခေါ် “ Matu pre, Mizo pre, Sangtu pre, Dai pre စသဖြင့် ခေါ်ဆိုကြလေ့ရှိရာ pre ဆိုသော စကားလုံးမှာ ကျယ်ပြောသောနေရာဒေသကြီးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဇုံကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဥပမာ. Mizo pre ဟုပြောပါက မီဇိုးချင်းလူမျိုးနေထိုင်ကြသော ဆယ်ရွာ ဆယ်ငါးရွာလောက်ကိုသာ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲ Mizo ram state တစ်ခုလုံးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ဆိုလျှင် ခူမီးလူမျိုးများထဲမှာ မျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မတူ-တအွား (ခေါ်) တအော မျိုးနွယ်စု နေထိုင်ရာဒေသကို (Ta aw pre or Ta-aw state) ဟု ခေါ်ဆိုလျှင် မှားပေလိမ့်မည်။ မည်သူတို့သည် တအော လူမျိုးဖြစ်ကြသည်ကို စစ်တမ်းကောက်မည် ဆိုလျှင် တအော လူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ခံယူသောသူ လူဦးရေ အလွန် နည်းပါးမည်ဖြစ်သည်။ တအောလူမျိုးဟု ခံယူလျှင် တအော ဘာသာစကားသည်လည်း ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ တအောလူမျိုးနွယ်စု စာရင်းတွင် မည်သည့် ရွာမှ မည်သည့်ရွာ အထိ ပါဝင်သည်၊ လူဦးရေ မည်မျှ ရှိသည်။ မည်သည့် ဘာသာစကား မည်သည့် မျိုးနွယ်စု (အစိုင် or clan) ပါဝင်သည်ဟူသော အချက်ကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားစရာ တစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။ သို့သော် တအော လူမျိုးဟုခံယူကာ မိမိတို့နယ်မြေကို တအော pre ဟုခေါ် တအောလူမျိုးနွယ်စုတို့တွင်လဲ ပြောဆိုနေကြသောဘာသာ စကားမတူကြပါ။ တရွာနဲ့ တစ်ရွာ သာဘာစကား ကွဲပြားနေသည်ကို တွေ့ရပေသည်။
စာရေးသူ လက်လှမ်းမှီသလောက် တအော အကြောင်းကို လေ့လာရာတွင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ စာရေးသူ၏ အဘိုးကြီး ဦးပေါက်ထာ(Pyk Thar) အသက် ( ၁၀၀) ကျော်က (ငါ့ မြေး သိချင်တယ်ဆိုရင် ပြောပေးပါမယ်၊ တအော- တအမ်းဆိုတာ ကောင်းတယ်လို့ မထင်လိုက်နဲ့ မတူလူမျိုးတွေက ကျွန်တော်တို့တွေကို နိမ်တဲ့ သဘောနဲ့ တအော-တအမ်းလို့ဆိုကြတာ၊ ဆိုလိုတာက အမှောင်နယ်မြေ မှာနေထိုင်တဲ့ သူတွေ၊ ဘာမှ မသိတဲ့သူတွေ၊ အောက်ဘက် အရပ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်) ဆိုပြီး ရှင်းပြခဲ့ဖူးသည်။ အဘိုးကြီး ရှင်းပြသည်ကို ပိုမို သိချင်သဖြင့် စာရေးသူ၏ ဘကြီး( အဖေ့ အစ်ကိုကြီး) ဦး အောင်းနန် အသက်(၈၀) ကျော်ထံ တအော အကြောင်းထပ်မံ မေးမြန်းခဲ့ရာ ဘကြီး လည်း အဘိုးကြီး ရှင်းပြခဲ့သည့် အတိုင်း ပြန်ရှင်းပြပေးခဲ့သည်။ “ဒါဆိုရင် တအောဆိုတဲ့ နယ်မြေက ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်နေရာ ဘယ်ရွာတွေ ပါဝင်သလဲ” လို့ မေးလိုက်တော့ ဘကြီးက “ သေသေချာချာ သတ်မှတ်ထားတာလဲ မရှိပါဘူး၊ အင်္ဂလိပ်စစ်မင်းတို့က ဟားခါးမှ မတူပီကို တိုက်နယ်တစ်ခုအဖြစ်ထားရှိကြပြီး မတူပီမှ တဆင့် တိုက်နယ်ပြန်ခွဲကာ တအော တိုက်နယ် စသဖြင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်” ဟုသာပြောပြခဲ့သည်။ ငယ်ငယ်တုန်းက စာရေးသူကို တအော အကြောင်း စာရေးသူတို့ ဇာတိရွာမှာရှိတဲ့ ဘကြီးတစ်ယောက်က ပြောပြခဲ့ဖူးသည်ကိုလဲ ဘကြီးနဲ့ အဘိုးကြီးရှင်းပြခဲ့သည့် အတိုင်းပြောပြခဲ့ဖူးသည်ကိုလည်း မှတ်သားခဲ့ဖူးသည်။ စာရေးသူ လေ့လာထားသည့် အချက်များမှန်ကန်သည်ဆိုလျှင် တအော pre ဟုခေါ်ဆိုခြင်းမှာ မှန်ကန်မည် မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တအောနယ်ဟုခံယူကြသော နေရာဒေသမှာ အလွန်သေးငယ် ကျဉ်းမြောင်း လှသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဝန်ခံချက်။ ၂၀၀၉ တွင် ဇာတိရွာရောက်သွားခဲ့စဉ်တုန်းက မေးမြန်းချက်များနဲ့ တအော ဆိုတဲ့ စကားလုံး အပေါ် ကျွန်တော့် ဇီးစေ့လောက်ရှိတဲ့ ဗဟုသုတ လေးကို အခြေခံပြီး ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တအော အကြောင်းကို ဒီထက် ကျယ်ပြန့်အောင် ရှင်းပြပေးနိုင်မယ်ဆိုလျှင် အတိုင်းထက် အလွန် ဝမ်းသာကြိုဆိုလျက်….
စွမ်းထက်မောင် (သဇင်မြေ) ရေးသားသည်။
တင်ပြသူ Ai Ptlu (မြန်မာစာ) တင်ပြချိန် 12/28/2012 02:44:00 am
ကဏ္ဍ: article (ဆောင်းပါး)
+ မှတ်ချက် +2မှတ်ချက်
ကိုယ်ကုတင်ကို ရွှေနန်းလို့ မထင်စေလိုပါ။
Dear ALL Khumis, please know there are MANY Khmi Editors and Writers before and after Van Tling and pray them to know one another who are senior or junior, etc. Thanks
မှတ်ချက် များကိုလွယ်ကူစွာ ပေးနိုင်ပါသည် ။ သို့ သော် မှတ်ချက်များကို စိစစ်ပြီးမှ ဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ဤစာမျက်နှာပေါ်မှာ ချက်ချင်း မြင်ရမည်မဟုတ်ပါ။ မကြာခင် နောက်တခါ ပြန်လာပြီး မိမိ၏ မှတ်ချက်ကို ပြန်ကြည့်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ဇူလိုင်လ 24 ရက်မှ စ၍ ထုတ်ယူနိုင်
2012 ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် ဖြေဆိုအောင်မြင်ကြသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အမှတ်စာရင်း၊ ရမှ...
မိမိ၏နှမအရင်းကိုသတ်ပြီး ရဲစခန်းတွင် ကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံသူ တွီလုံးရွာသားတစ်ဦး
ပလက်ဝ၊ သြဂုတ် ၉ ----ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ပီချောင်းထဲရှိ ရပ်ချောင်းအုပ်စု၊ တွီလုံးရွာနေ အဘ ဦးဝင်းထိုက်၏ သား ဦးသိန်းကျော် အသက် ၂၈နှစ် ခန့်ရ...
President my Kramo pri khrukhra nai nekhyp, nekhyp y khen ai nai kavui kamkawm sa nai ra Dr. Ngun cung Lian abawi
Burma pri President U Thein Sein my Kramo pri ai, Rohingya kolah Muslim hawi Budah hawi atlie nai satang ra y, manai sa ai moh nan...
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ပီနန်းမြို့၊ သြဂုတ် ၈--- ချင်းပြည်နယ်၊ပလက်ဝမြို့နယ်၊ကျောက်ဖျာကျေး ရွာသားများဖြစ်ကြသော အသက် ၂၅ အရွယ် သူငယ်ချင်းများဖြစ်...
ENC ဥက္ကဌ Dr. Lian Hmung Sakhong အားချင်းလူထုမှ လေဆိပ်တွင်ကြိုဆို
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁-- ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းအပြီး နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ခွင့်မရသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကော...
အလငသ ကီမိုတောင်ခရီးစဉ် နိုဝင်ဘာ တတိယပတ်တွင်စီစဉ်
ပလက်ဝ၊နိုဝင်ဘာ ၈ --- မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော် စစ်တွေသာသနာပိုင်နယ်၊ အင်္ဂလီကန်လူငယ်များအသင်းအနေဖြင့် ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၆-...
ခူမီးလူမျိုးထဲမှ ပေါ်ထွက်သော အယ်ဒီတာတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
ခူမီးလူမျိုးထဲက ထင်ရှားတဲ့စာရေးဆရာ၊ အယ်ဒီတာ တစ်ဦးနဲ့ ၂၀၁၂ ခု၊ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ မေး - ဆရာ့နာမည်နဲ့ ...
ဆမီးရွာကို ဆမီးမြို့နယ်ခွဲအဖြစ် ပြည်ထောင်စု အစိုးရမှ အတည်ပြုကြေငြာ
ဆမီးရွာ (ယခုမြို့နယ်ခွဲ) ပုံ (ဓါတ်ပုံ - အိုက်ကျော်) သြဂုတ်7ဆမီးသည် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကျောက် ပန်းတောင်ခေါ် ကီမိုတောင်ြေ...
ပလက်ဝမြို့နယ်၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့် မိခင်နှင့် အမွှာကလေး အသက်ရှုံးဆုံး
ပလက်ဝ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ --- ပြီးခဲ့သော ဇန်န၀ါရီ ၇ ရက်နေ့က ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ကလေးအမွာပူးမွေးဖွါးသူ မိခင်တစ်ဦးသေ...
ပြင်ပတွင် ပညာသင်ယူနေသောခူမီးအမျိုးသား အိုက်မောင်ညိုနှင့် စကားပြောခြင်း
KMG - ကိုမောင်ညိုအခုတက်ရောက်နေတဲ့ အတန်းနှင့် ကျောင်းအကြောင်း ကိုပြောပြပါဦး။ Ai Maung Nyo - အခု ကျွန်တော် တက်နေတာကတော့ Master of Div...
မြန်မာ ကျပ်ငွေ နှုန်းသိစေရန်
Copyright © 2011. Khumi Media Group - All Rights Reserved